Qaabkayaga La-talinta - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Barnaamijka la-talinta ee MHS wuxuu bixiyaa habeyn shaqsiyeed iyo waxqabad leh oo loogu talagalay iswaafaqsan Qaabka La-talinta Dugsiga Dhamaystiran ee Ururka Dugsiyada Mareykanka (ASCA).
Soo dejiso warqadeena latalinta si aad wax badan uga barato.
Kooxda adeegyada taageerada MHS
MHS waxay leedahay koox adeegyo taageero oo isku tiirsan oo ka kooban:
Lataliyeyaasha Dugsiga. Sagaal la taliyayaal dugsi oo ka tirsan MHS ayaa saameyn la qiyaasi karo ku leh arday kasta noloshiisa, iyagoo siiya taageero xagga ladnaanta bulshada iyo shucuurta iyo hagitaan ku saabsan qorsheynta tacliinta iyo himilooyinka qalin-jabinta ka dib. Doorka ugu muhiimsan ee lataliyuhu waa inuu u adeego sidii qof weyn oo lagu kalsoon yahay. La-taliyayaashu waxay u dhaqmaan sidii u-doodayaal, iyagoo la kaashanaya ardayda, waalidiinta iyo macallimiinta si loo hubiyo guul iyo inay ardayda ku sii hayaan jidka si ay u gaaraan himilooyinkooda shaqsiyeed. La kulan la-taliyayaasha halkan.
Heerarka : Laga bilaabo deyrta 2019, la-taliyaha / saamiga ardayda ee MHS waa 1: 340, oo ay ku jiraan la-taliyaha 504. Ugu dambeyn Ogosto 2020, MHS wuxuu ku dari doonaa la-taliye tobnaad, oo keenaya saamiga 1: 309. (Saamiyadan kuma jiraan la-taliyaha kulleejada.)
Helitaanka la-taliyaha : La-taliyayaasha MHS ayaa diyaar u ah inay la kulmaan ardayda mid-mid ballan ah (ardayda iyo qoysasku waxay kula xiriiri karaan la-taliyahooda taleefan, emayl ama fariin Schoology). La-taliye socod ayaa sidoo kale la heli karaa xilli kasta oo fasal ah oo maalintii ah. Mararka qaarkood sanad dugsiyeedka, lataliyayaashu waxay hogaamiyaan koox yar, seminaaro heer fasal ah iyo shirar qorshayn shaqsiyeed.
Laba shaqaale bulsho
Shaqaalaha sooshalka ee iskuulka, Aubrie Roley , waxay bixisaa taageero ku saleysan caddeyn, adeegyo wax ka qabasho iyo faragelin. Waxay hogaamin doontaa shirarka shaqsiyadeed iyo koox yar waxayna sare u qaadi doontaa isku xirnaanta ardayda, qoysaska iyo ilaha bulshada.
Kathleen Leisman waxay si gaar ah ardayda uga taageertaa Qorshayaasha Waxbarshada Gaarka ah (IEPs) iyo kuwa qaata adeegyada Waxbarashada Gaarka ah.
Xubnaha soo socda ee shaqaalaha waxay diiradda saarayaan kooxda Adeegyada Taageerada Ardayda ee MHS:
Shelly Hughes waa lataliyaha 504. Ms. Hughes waxay si iskaashi leh ula shaqaysaa kooxda si loo abuuro, loo qiimeeyo loona hirgeliyo qorshayaasha 504. Tani waa boos gaar ah halkan Dugsiga Sare ee Minnetonka, maadaama inta badan dugsiyada sare ay shaqadan ku daraan doorka lataliyaha.
Phil Trout waa lataliyaha kuliyada. Mudane Trout wuxuu si toos ah ulashaqeeyaa ardayda iyo qoysaskooda agagaaraha qorshaynta dugsiga sare kadib. Wuxuu sidoo kale la taliya kasta la taageeraa ardaydooda. Fadlan booqo bogga La-talinta Kuleejka si aad wax badan uga ogaato.
Laura Herbst waa isku duwaha waxbarashada sare. Laura waa la taliye shati oo shati leh. Waxay lashaqeysaa Advanced Placement (AP) iyo ardayda International Baccalaureate (IB), iyadoo kala talinaysa xulashada koorsada isla markaana siineysa taageero sida ay u dhameystiraan koorsooyinkan iyo imtixaanadan. 84% ardayda MHS waxay qaataan ugu yaraan hal koorso AP ama IB ah marka loo eego xirfadooda waxbarasho. Ms. Herbst ayaa hogaamineysa barnaamijka "Launch" si loogu taageero ardayda qaadata koorsadooda koowaad ee AP ama IB.
Renee Morabito waa iskuduwaha barnaamijka Compass. Compass waa barnaamij muddo soo jiitamayay oo loogu talagalay ardayda la halgameysa caqabadaha bulsho / shucuureed ee saameeya awooddooda si ay ugu guuleystaan dugsiga siyaabo kala duwan. Compass wuxuu ardayda siiyaa fursado ay wax ku bartaan koox wada jir ah iyadoo la xoojinayo horumarinta xirfadaha tacliinta iyo xirfadaha dadka dhexdooda ah. Ms. Morabito waxay si toos ah u taageertaa ku dhowaad 60 arday. Waxay sidoo kale ku taageertaa shaqadeena barashada madaxa banaan, fayo qabka ardayda, iyo wadashaqeyn dhow oo lala yeesho dhamaan la-taliyayaasha MHS ee dadaaladayada taageerada ardayda.
Dr. Jonna Hirsch waa saykolojisteena iskuulka. Doorka Dr. Xirsh wuxuu inta badan u heellan yahay nidaamka qiimeynta iyo dib-u-qiimeynta ardayda adeegyada waxbarashada gaarka ah. Iyadu waxay ka mid tahay Kooxda Taakulaynta Ardayda ee dugsiga oo dusha kala socota u-gudbinta iyo ka-hortagga hawsha. Doorkan, waxay ku taageertaa kooxda fikradaha waxqabadyada. Waxay maamuli doontaa, qiimeyn doontaa oo tarjumi doontaa natiijooyinka aaladaha qiimeynta shaqsiyadeed / nidaamyada lagu cabiro awoodda barashada / qiimeynta garashada iyo horumarka bulshada, shucuurta, iyo dhaqanka. Dr. Hirsch wuxuu kaloo iskuduwayaa koorsadeena taageerada caafimaadka dhimirka ee internetka ee EmpowerU ee ardayda.
MHS waxay lashaqeeyaan La talinta Relate si ay u bixiyaan adeegyo isku-meel ah oo caafimaadka dhimirka ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haysannaa boos caafimaad maskaxeed waqti-buuxa ah oo ay taageerayaan laba daaweeyeyaal ruqsad haysta iyo hal boos oo waqti-dhiman ah lataliyahayaga caafimaadka kiimikada ee ardayda wajahaysa walaac caafimaad kiimiko. Judy Hanson waxay ku jirtaa goobta laba maalmood usbuucii. Adeegyo laxiriira ayaa heli kara ardayda haddii kale aan heli karin adeegyada. Adeegyada caafimaadka dhimirka ee ku saleysan dugsiga, waxay baabi'inayaan caqabadaha ardayda iyo qoysaska. U gudbinta dhakhaatiirtayada 'Relate clinics' waxay ka yimaadaan lataliyaha iskuulka iyo / ama howlwadeenka bulshada ee iskuulka.
Dhacdooyinka Heerka Fasalka
Habeenkii Hanuuninta Waalidka Fasalka 9aad
Fiid fiid ah oo ay hogaaminayaan maamulayaasha iyo lataliyayaasha.
Seminaarka Freshman Fall
La taliyayaashu waxay la kulmaan ardaydooda fasalka koowaad ee kooxo yar yar si ay ugala hadlaan kala guurka dugsiga sare waxayna u soo bandhigaan macluumaad ku saabsan ilaha dugsiga, waxqabadyada manhajka iyo shuruudaha qalinjabinta. Seminaarkani wuxuu dhacayaa Sebtember.
Fall Habeenkii Waalidka Fasalka 9aad
La-taliyayaashu waxay u bandhigaan waalidiinta ardayga Freshman inta lagu jiro shirarka dayrta. Macluumaadka la bixiyay waxaa ku jiri doona agabyada dugsiga, shaqada koorsada, muhiimada darajooyinka iyo soo-jeedinta waalidiinta ee ku saabsan sida loo taageero guusha ardaygooda.
Kulamada Shakhsiyeed ee Freshman
La taliyayaashu waxay si gooni gooni ah ula kulmaan mid kasta oo ka mid ah ardaydooda fasalka koowaad si ay ugala hadlaan kala guurka, hubinta tacliinta, u abuuraan yoolal isla markaana u hubiyaan in ardaydu ka warqabaan ilaha iyo waxqabadyada dugsiga. Kulamadani waxay dhacaan inta lagu gudajiro rubuca 2. Ardayda waa inay jadwalaan kulankooda.
Diiwaangelinta Freshman Night Waalidka
Fiid fiid ah oo wargelin ah si looga caawiyo waalidiinta cusub inay wax ka bartaan xulashada koorsada iyo habka diiwaangelinta. Tani waxay dhacdaa dhammaadka Janaayo ama horraanta Febraayo.
Seminaarka Fall Sophomore
La taliyayaashu waxay la kulmaan ardeyda dhigata fasalka labaad ee kooxo yar yar si ay u soo bandhigaan imtixaanka PLAN, ku dhiiri geliyaan ka qayb qaadashada manhajka, dib u eegis ku sameeyaan ilaha tacliinta iyo ka wada hadlaan qorshaynta mustaqbalka iyagoo adeegsanaya Naviance Student . Tani waxay dhici doontaa Oktoobar.
Kulankii Tafsiirka Natiijada QORSHE
La-taliyayaashu waxay waalidiinta u fidiyaan kulan macluumaad ah si ay ugu sharxaan sida loo tarjumo loona isticmaalo natiijooyinka PSAT qorshaynta waxbarashada.
Diiwaangelinta Sophomore Night Waalidka
Fiid fiid ah oo macluumaad ah si looga caawiyo waalidiinta fasalka labaad inay wax ka bartaan xulashada koorsada iyo habka diiwaangelinta. Tani waxay dhacdaa dhammaadka Janaayo ama horraanta Febraayo.
Xaddiga kordhinta xulashooyinka barnaamijyada tacliimeed ee ay heli karaan ardayda dhigata fasalka 11aad, la-taliyayaashu waxay la kulmaan ardaydooda fasalka labaad ku jirta kooxo yar yar inta lagu jiro hawsha diiwaangelinta koorsada. Barnaamijyo kala duwan ayaa la sharaxay ardayduna waxay fursad u leeyihiin inay su'aalo weydiiyaan. Seminaarkani wuxuu dhici doonaa Febraayo inta lagu jiro xilliga diiwaangelinta.
Seminaar Fall Junior
La taliyayaashu waxay la kulmaan ardaydooda yar yar kooxo yar yar si ay u siiyaan faahfaahin ku saabsan una diiwaan geliyaan Carwada NACAC ee Kulliyadda Qaranka ee soo socota. Ardaydu waxay sidoo kale isticmaali doonaan Naviance Student . Seminaarkani wuxuu dhacaa bisha Sebtember.
Carwada Qaranka ee NACAC
Bandhigga Kulliyadda NACAC waa safar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, laakiin dhammaan ardayda da'da yar waxaa si xoog leh loogu dhiirigelinayaa inay ka soo qayb galaan. Carwada kulleejadu waxay ka dhacdaa Xarunta Shirarka ee Minneapolis waxayna dhacdaa usbuuca koowaad ee Oktoobar.
Habeenkii Waalidka Da 'yarta ahaa
Fiid fiid ah oo macluumaad ah si looga caawiyo waalidiinta fasalka labaad inay wax ka bartaan xulashada koorsada iyo habka diiwaangelinta. Kulankani wuxuu sidoo kale bixin doonaa hordhac ku saabsan habka dalabka kulleejada. Tani waxay dhacdaa dhammaadka Janaayo ama horraanta Febraayo.
Seminaarka Diiwaangelinta Dhalinyarada
La taliyayaashu waxay la kulmaan ardayda sophomore kooxo yar yar inta lagu guda jiro hawsha diiwaangelinta koorsada. Barnaamijyo kala duwan ayaa la sharaxay ardayduna waxay fursad u leeyihiin inay su'aalo weydiiyaan. Seminaarkani wuxuu dhici doonaa Febraayo inta lagu jiro xilliga diiwaangelinta.
La taliyayaashu waxay la kulmaan ardaydooda yar yar kooxo yar yar si ay ugala hadlaan qorshaynta dugsiga sare ka dib, dib ugu eegaan qalabka qorshaynta kuleejka Ardayga Naviance. Seminaarkan wuxuu dhacayaa dhammaadka Febraayo.
Arag Seminarka Guga 2020 - Kalfadhiga 1aad
Arag Seminarka Guga 2020 - Kalfadhiga II
Kulamada Shakhsiyeed ee Yaryar
La-taliyayaashu waxay si shaqsi ah ula kulmaan mid kasta oo ka mid ah ardayda yaryar si ay ugala hadlaan qorshaynta dugsiga sare kadib. Kulamadani waxay dhacaan inta lagu jiro Febraayo, Maarso iyo Abriil. Ardaydu waa inay qabsadaan kulankooda.
Habeen Waalid Sare
Fiid fiidiyow ah oo loogu talagalay waalidiinta waayeelka ah, oo uu hoggaaminayo MHS College iyo Lataliyaha Shaqada Phil Trout. Kulankani wuxuu ka caawiyaa diyaarinta waalidiinta Waayeelka ah xilli-dugsiyeedka soo socda ee kulleejada. Eeg bogagga bandhigga laga bilaabo habeenka waalidka waayeelka ah ee sannadkan.
Siminaar Fall Senior
La taliyayaashu waxay la kulmaan ardaydooda waayeelka ah kooxo yar yar si ay ugala hadlaan saadka nidaamka arjiga kuleejka, oo ay kujiraan sida loo codsado qoraallada, waraaqaha talobixinta, fahamka Go'aanka Hore iyo Tallaabada Hore, qorista qoraalka, Codsiga guud, Xiriirka Qoyska, iwm. bishii Sebtember.
Kulamo Shakhsiyeed Sare
La taliyayaashu waxay si shaqsi ah ula kulmaan mid kasta oo ka mid ah ardaydooda sare si ay ugala hadlaan qorshaynta dugsiga sare kadib. Kulamadani waxay dhacaan inta lagu jiro rubuca 1. Ardaydu waa inay jadwal u yeeshaan kulankooda
Bogagga Lataliyaha Iskuulka waxaa ku jira macluumaadka xiriirka dhammaan lataliyayaasha.
Si aad u ballansatid ballan latalin ah, fadlan wac 952-401-5811.